Global Voices teny Malagasy » Fanolorana ny Bilaogera Mpampifandray, Ndesanjo Macha · Global Voices teny Malagasy » Print
Fanolorana ny Bilaogera Mpampifandray, Ndesanjo Macha
Voadika ny 03 Desambra 2017 10:41 GMT 1	 · Mpanoratra Ethan Zuckerman Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Mainty, Tanzania, Mediam-bahoaka
Indraindray ny aterineto dia manampy anao hahita olona mahaliana eny ampitetezana izao tontolo izao. Ary indraindray dia manampy anao hahafantatra hoe ireo olona mahaliana nihaonanao teny am-pandehanana nitety ny tontolo ireo dia miaina tsy lavitra anao (mpifanolo-bodirindrina).
Karazana traikefa faharoa no niainako tamin'ny Alahady 17 Aprily 2005, rehefa nandeha aho nankany Brattleboro, Vermont (any amin'ny 100km , saingy ao amin'ny manodidina ahy ihany. Miasa be aminay aty ambanivohitr'i Nouvelle-Angleterre ny fitondràna fiara…) mba hihaona amin'i Ndesanjo Macha, iray amin'ìireo endrika diso fantatra ao amin'ny tontolon'ny bilaogy amin'ny fiteny Swahili. Indray tolakandro amin'ilay mipoaka tsara iny ny masoandro, efa manakaiky lohataona, nipetraka teo amin'ny toerana iray fisotroana kafe izahay nitazana ny Renirano Connecticut ary niresaka momba ny Global Voices, ny bilaogy ao Afrika ary lohahevitra am-polony marobe, manaporofo fa afaka mitranga na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao ny fifanakalozandresaka mahakasika izao tontolo izao.
Monina ao amin'ny sisintany manasaraka an'i Vermont/New Hampshire, miezaka mizatra ny ririnina ao Nouvelle-Angleterre no sady mampianatra ny teny Kiswahili ao amin'ny Sekoly Fampiofanana Iraisampirenena,  iray amin'ireo sekoly sangany manerantany amin'ny fanofanana momba ny teny sy kolontsaina i Ndesanjo, Tanzaniana mpisolovava sady mpanao gazety, lasa bilaogera. Rehefa tonga tao Etazonia i Ndesanjo taorian'ny nanaovany ny asa maha-mpisolovava tao Namibia, toerana niasàny niaraka tamin'ireo Kongoley mpitsoaponenana, tafaraka niasa tamin'i Dr. Rubin Patterson avy ao amin'ny Anjerimanontolon'i Toledo izy. Tamin'ny fanampiany an'i Patterson hamoaka ny gazety “Vina ho an'ny Fampandrosoana Erantany sy ny Teknolojia (ang)” , nahita ny momba ny bilaogy i Ndesanjo, ary tsy ela dia lasa mpanoratra ny Digital Africa  (amin'ny teny Anglisy) sy ny Jikomboe , amin'ny teny Swahili.
Jikomboe (Afaho ny Tenanao!) no angamba bilaogy voalohany nipoitra tamin'ny fiteny Swahili tety anaty tontolon'ny bilaogy. Izy no voalohany tamin'ireo bilaogy marobe amin'ny fiteny Swahili tonga avy any Tanzania – vao avy notanisain'i Ndesanjo indrindra ireo bilaogy tanzaniana valo amin'ny fiteny swahili  ao amin'ny Global Voices.  Toa an'i Ndesanjo, mpanao gazety matianina ny ankamaroan'ireo Tanzaniana bilaogera – Isankerinandro i Ndesanjio dia manoratra tsanganana ho an'ny Mwananchi (Ny Olompirenena), iray amin'ireo gazety amin'ny fiteny Swahili ao Dar Es Salaam. Mety hampisy sakana psikolojika eo amin'ireo tanzaniàna antonontonony – raha toa ka mpanao gazety daholo ireo bilaogera, mila hoe mpanao gazety ve izany ianao vao afaka ny hanoratra bilaogy?
Maninona i Kenya no manana tontolonà bilaogy mavitrika, raha mbola an-dàlam-panombohana kosa ny ao Tanzania? Ny resaka fiteny no toa fanalahidy fototra anankiray. Nandritry ny fitondràn'ny Filoha Julius Nyerere (1960 – 1985), ny filozofia sosialista nananany, Ujama, dia nanantitrantitra ny fahavitantena sy ny “fametrahana vohitra” ary nampihena lanja ny fifandraisana amin'ny tontolo ivelany. (Araka ny fanadihadian'i Ndesanjo, saiky azo lazaina ho tsy azo tanterahana ny fakàna fahazoandàlana (pasipaoro) tao Tanzania fony faha-Nyerere, raha tsy hoe nandeha nianatra tany ivelany.) Nantitranterina mafy mihitsy ny Swahili, ary nahena ny lanjan'ny teny Anglisy, niteraka andian-taranaka iray nahazo aina kokoa tao anatin'ny teny Swahili raha mitaha amin'ny Anglisy.
Mazava ho azy fa vitsy ny taridàlana sy ny azo nakàna hevitra ho amin'ny fitorahana bilaogy amin'ny teny Swahili, na teo aza ny fisian'ireo 100 tapitrisa mahery miteny ny Swahili ao Afrika Atsinanana. Heverin'i Ndesanjo fa tena zavadehibe ho an'i Afrika Atsinanana ny hahafahany mibilaogy amin'ny teny Swahili, sy ny ho ren'izao tontolo izao. Manomana fitetezana sy famintinana ny tontolon'ny bilaogy amin'ny fiteny Swahili izy ho an'ny Global Voices, hanampiana ireo Swahili niangaran'ny vintana hahafantatra izay resadresaka mitranga ao amin'ny faritra .
Mety ho Amerikàna ny sasany amin'ireo bilaogera manaraka eo amin'ny teny Swahili – Angatahan'i Ndesanjo ireo mpianany ao amin'ny SIT mba hanoratra bilaogy amin'ny teny Swahili ho toy ny fiomanana amin'ny fitsidihan'izy ireo ny any Afrika Atsinanana. Misy bilaogy iray fanoroana làlana ho an'ny lakilasy  (izay ahafahan'i Ndesanjo hampianatra na amin'ny andron'ny tafiotran-dranomandry anafoanan'ny ao Vermont ny fampianarana aza), ary gazety avy amin'ireo mpianatra mikarakara fivahinianana ho any Tanzania ho toy ny mpiasa an-tsitrapo ao amin'ny Peace Corps , na hihanika ny Havoana midezan'i Kilimanjaro  ho fanangonana vola ho an'ny fanentanana fampahafantarana momba ny SIDA.
Raha manomboka mahasarika ao Tanzania ny bilaogy, dia any amin'ny hip-hop  no tena miainga ny resadresaka politika hoy i Ndesanjo tamiko. Tsy toy ny any Etazonia, fa nahadingana ny sakana napetraky ny taona tao Tanzania ny hip-hop – mazàna ny reniny sy ireo nenitoan'i Ndesanjo no manoso-kevitra azy mahakasika ireo mpankanto malaza. Mandritra ny famoriambahoaka ataon'izy ireo, efa zava-panaon'ireo endrika politika ao Tanzania ny manasongadina tsy tapaka ireo mpisehatra hip-hop mivoy resaka politika. Natoron'i Ndesanjo ahy ny Vovonamben'ny Hip-Hop Tanzaniana , hatramin'ny Xplastaz  (tarika tokana izay manambatra ny fombandrazana Masai amin'ny rap amin'izao fotoana izao), BongoXplosion  sy MrII . Mba hanitarana ny vondrom-piarahamonin'ireo Tanzaniana bilaogera hivoaka ny sehatry ny mpanao gazety sy ireo mpiondana solosaina fotsiny, angamba ilain'ny vondrom-piarahamonin'ny fanoratana bilaogy erantany ny manakaiky ireo mpiangaly rap sy mpilalao baolina kitra – ireo maherifo izay misambotra sy mitahiry ny eritreritry ny rehetra. Araka ny ametrahan'i Ndesanjo azy: “Alaivo sary ao an-tsaina fotsiny hoe firy ireo Afrkàna no afaka ny ho liana amin'ny fanoratana bilaogy raha nanana bilaogy i Freddy Adu  na George Weah  ?”
Ny fanalahidin'ny fanokafana resadresaka ao anaty tontolon'ny fanoratana bilaogy Tanzaniàna ho any amin'izao tontolo izao dia ny fandikàna miainga avy amin'ny Swahili. Angamba isika hiandry elaela alohan'ny hanoloran'ny Babelfish  milina mpandika ny Swahili, saingy efa vinavinan'i Ndesanjo ny hanomboka hanome fitetezana amin'ny teny anglisy ireo lahatsoratra goavana ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Swahili ho an'ny Global Voices. Ary, raha tsara vintana isika, azontsika alaina izy handika ireo tononkira rap sasantsasany ho antsika ihany koa. Tongasoa ato amin'ny Global voices, Ndesanjo!
(Fanamarihan'ny mpandika: tany ivelany nandritra ny fihaonambe fanaon'ny Global Voices, no nifankahafantarako tamin'i Ndesanjo, nandritry ny fisakafoanana niarahan'ny rehetra tao aminà toeram-pisakafoana iray. Lehilahy mahafinaritra, mahay mihaino ny hafa ary tsy mihafahafa velively fa tena tia mifandray tokoa)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/12/03/110355/
 Sekoly Fampiofanana Iraisampirenena,: http://www.sit.edu/
 “Vina ho an'ny Fampandrosoana Erantany sy ny Teknolojia (ang)”: http://sasweb.utoledo.edu/pgdt/index.html
 Digital Africa: http://digitalafrica.blogspot.com/
 bilaogy tanzaniana valo amin'ny fiteny swahili: https://globalvoicesonline.org/wiki/index.php/Tanzania
 Global Voices.: https://sw.globalvoices.org/
 bilaogy iray fanoroana làlana ho an'ny lakilasy: http://semakiswahili.blogspot.com/
 mpiasa an-tsitrapo ao amin'ny Peace Corps: http://taittanzania.blogspot.com/
 hihanika ny Havoana midezan'i Kilimanjaro: http://www.climbkiliforaids.blogspot.com/
 Vovonamben'ny Hip-Hop Tanzaniana: http://www.tanzaniahiphopsummit.co.tz/
 Freddy Adu: http://sportsillustrated.cnn.com/2004/soccer/03/28/bc.sport.soccer.adu/
 George Weah: http://www.unicef.org/people/people_george_weah.html